Fanambadian'ny mitovy fananahana :: Naboraky ny kardinaly Tsarahazana Désiré ny fandisoana ny hevitry ny Papa • AoRaha
Nodisoin’ny fiombonamben’ny Eglizy Katôlika Romana eto Madagasikara ny fampielezam-baovao manambara ny « faneken’ny Papa François ny mariazy arapanjakana eo amin’ireo olona mitovy fananahana». Nampahafantarin’ny Kardinaly Tsarahazana Désiré tao anatin’ny fanambarana novakiany, omaly, fa « niharan’ny famitahana avo lenta ny Papa François (…) satria tsy mbola nanao fanehoan-kevitra vaovao momba ny fanambadiana eo amin’ny lahy samy lahy na vavy samy vavy ny Papa Ray Masina ».
Horonantsary ir ay nataon’ilay mpanao gazety rosiana, Evgeny Afineevsky, izay naseho tany Roma, tamin’ny 21 oktobra 2020, nampitondrainy ny lohateny « Franchesco » no fototra niteraka ny resabe tamin’ireo haino aman-jery sy tranonkalam-pifandraisana, ka nilaza ny faneken’ny Papa François ny fanambadiana sivily eo amin’ireo mitovy fananahana.
« Tsy marina velively izany. Navadik’ilay mpanao gazety araka izay nitiavany azy ny fanehoan-kevitry ny Papa François momba ny fanambadian’ireo olona mitovy fananahana », hoy ny Kardinaly Tsarahazana Désiré. Tafatafa nataona mpanao gazety meksikana, Valentina Alazraki, teny ambony fiaramanidina tamin’ny fiteny Espanôla, 18 volana lasa izay, no notapatapahina sy nalain’io mpanao gazety rosiana io ka nampidirina tao anatin’ny horonantsary fanadihadiana nataony.
Iraika amby roapolo segaondra monja ny faharetan’ny resaky ny Papa François tao anatin’ilay fanadihadiana.
« Notapatapahina ary natambatra mba hoentina hanaporofoana ny faneken’ny Papa ny fanambadiana sivily eo amin’ny lahy sy ny lahy ary ny vavy samy vavy, avy eo. Niniana nodisoina mihitsy ny dikan-teny nanazavana an’io fanehoan-kevitr’io », araka ny fanampim-panazavan’ny kardinaly Tsarahazana Désiré.
« Aoka isika ho tony sy tsy ho tafintohina satria tsy misy velively ny fanekena ny fanambadiana sivily eo amin’ ireo olona mitovy fananahana. Hamafiso hatrany ny finoantsika », hoy ny toromariky ny Kardinaly, omaly. Nampahafantariny ny fisian’ny fanazavana amin’ny antsipiriany amin’ny fomba ofisialy mikasika ny fanambadiana, tsy ho ela, izay hataon’ny fiombonamben’ireo Eveka katôlika eto amintsika.